TRF na Media | Foundationgwọ Ọrụ --gwọ - --hụnanya Mmekọahụ na Intanet
Home TRF na Media
TRF na Media
Onyinye Regwọ hasgwọ ahụ apụtawo ọtụtụ ugboro na mgbasa ozi. Lee ụfọdụ akụkọ gosipụtara ọrụ anyị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọwapụta Thegwọ Ọrụ ongwọ Ọrụ na ikpo okwu mgbasa ozi gị, biko kpọtụrụ anyị Press Office na info@rewardfoundation.org. Anyị na-akwado ezigbo akwụkwọ akụkọ. Ajuju ajuju anyi nile ka ewulitere na nyocha ohuru banyere ihe ihe nlere ndi ozo bu na onye obula. Anyị nwere ike inyere gị aka n'ịmepụta akụkọ gị. Anyị nwekwara ahụmịhe n'ide ederede uche maka akwụkwọ akụkọ na akwụkwọ akụkọ mba.
Mary Sharpe nwere ahụmịhe mba ụwa dịka onye ọrụ mgbasa ozi. Ọ rụrụ ọrụ ọtụtụ afọ na European Commission maka European Commissioner for Research, Innovation and Science. Nkọwa na ntinye okwu maka mgbasa ozi dị na ọkwa dị mkpirikpi.
Anyị gosipụtara na akụkọ ihu ihu na Sunday Times Scottish Edition. Ndị ụlọ ọrụ họpụtara nke a n'ihe karịrị mba iri na abụọ. Anyị enyelakwa ọdịnaya dị na Guardian, The Telegraph na ọtụtụ UK na tabloids ndị Scotland.
Anyị Ntanetị YouTube na-ekpuchi isiokwu ndị nwere mmasị ugbu a gụnyere Autism Spectrum Disorder na ọdịnihu nke nchọpụta sayensị banyere iji ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ mee ihe.